बारम्बार पिसाब चुहिने तथा पोल्ने कारण के होला ? – Health Post Nepal
बारम्बार पिसाब चुहिने तथा पोल्ने कारण के होला ?
२०७६ असार २५ गते १४:४०
म पिसाब चुहिने तथा पोल्ने समस्याले ग्रस्त छु । कहिलेकाहीँ थाहा नपाईकनै पिसाब खुस्किसकेको हुन्छ । वेला–वेलमा पिसाब पोलिरहेको हुन्छ । के कारणले यस्तो भएको होला ?
वर्ष २५, सिन्धुपोल्चोक
डा. पवनराज चालिसे
पिसाब चुहिने कारण जन्मजातै पनि हुन सक्छ । बच्चाहरूमा पिसाबको नली पिसाबथैलोमा जोडिएको हुनुपर्नेमा पिसाब रोक्ने मेकानिजमभन्दा बाहिर जोडिँदा पिसाब चुहिने हुन्छ । बच्चादेखि नै पिसाब चुहिरहेको छ भने यो जन्मजात रोग हो ।
यदि पछि पिसाब चुहिन थालेको हो भने यसको कारण पिसाबथैली कमसल हुनाले यस्तो हुन्छ । ओभर याक्टिभ ब्लाडर अर्थात् पिसाबको थैलो बढी सक्रिय हुँदा यस्तो हुन्छ । पिसाब त रोक्न सकिन्छ, तर ओभर याक्टिभ ब्लाडर हुँदा पिसाब लाग्यो कि चुहिलाल्छ । त्यसैगरी, खोक्दा, हाच्छ्यिूँ गर्दा पेटको पेसर बढेको खण्डमा पनि पिसाब रोक्न नसक्ने समस्या हुन्छ । तनावका वेला पे्रसर बढेपछि पिसाब चुहिन्छ । ढाडमा चोट लागेका बेलमा पनि थैलीले राम्रोसँग पिसाब जम्मा गर्न सक्दैन । पिसाब चुहिरहने समस्या रोग नै हो, जसको रोकथामका लागि डाक्टरसँग उपयुक्त परामर्शको खाँचो हुन्छ । मानिसले थाहै नपाईकन पिसाब चुहिन्छ ।
पिसाबको थैली तथा नलीमा इन्फेक्सन भएका कारणले पनि पिसाब पोल्ने हुन्छ । पिसाबमा आएकाको खराबीका कारण वा पिसाबमा बढी एसिड भएकाले पनि पिसाब पोल्ने समस्या देखिन्छ । कहिलेकाहीँ मूत्ररोगका कारणले पनि पिसाब पोल्न सक्छ । असुरक्षित यौनसम्पर्कपछि पनि पिसाब पोल्न सक्छ ।
जहाँसम्म पिसाब पोल्ने कुरा छ, सामान्यतया पिसाब इन्फेक्सनका कारणले पोल्ने गर्छ । केहिलेकाहीँ पानीको मात्रा ज्यादै कम भयो भने वा डिहाइड्रेसन भयो भने एकदमै डार्क पिसाब हुन्छ, जसलाई कन्सन्ट्रेटेड पिसाब भनिन्छ, यस्तोमा पिसाब पोल्ने गर्छ । जस्तो कि, कडा एक्सरसाइज गर्दा वा धेरै कुद्दा पनि पिसाब यस्तो हुने गर्छ । त्यसैले पानी कम खानाले पनि पिसाब पोल्ने गर्छ ।
पिसाब चुहिने तथा पोल्ने
One thought on “बारम्बार पिसाब चुहिने तथा पोल्ने कारण के होला ?”
BJ GURUNG says:
डा.साब नमस्कार याे कमेन्ट गर्ने ठाँउ भये पनि प्रस्न गर्ने ठाँउ थाहा नभएकोले येहि बाट प्रस्न गर्दैछु क्षमा गर्नु होला ।मेरो प्रस्न येस प्रकार छ । मेरो पिसाब र दिशा औला औला जस्तो हुन्छ चर्पी म गयो कहिले 1चाेटी आउछ आनि धेरै बेर (10-25मिनेट) सम्म आउला जस्तो हुन्छ ।तर आउदैन 25मिनेट जति पछी बल्ला आउछ । आगदी नै उठे भने केही समय पछी नै दिशा लाग्छ । toilet बस्द बस्द खुट्टा पुरै गल्चा ।पिसाब पनि तेस्तै 1/2 मिनेट कुर्नु पर्छ । 1 चोती पिसाब गरि सकेर 1/2 मिनेट नकुरी हिंड्यो भने भित्रै चुहिन्चा । यो के समस्या हो ? र समाधान को उपाय के होला डा. साप ?
कोरोना संक्रमित भएपछि के खाने, के नखाने?
के अनियमित महिनावारीले गर्भवती नहुने सम्भावना हुन्छ?
गर्भावस्थामा लगाइने कोरोनाविरुद्धको खोपले गर्भपात हुन्छ?
ओमिक्रोन : संक्रमित भएको थाहा कसरी पाउने, खोपको प्रभावकारिता कति?
काठमाडौंमा डेंगु फैलाउँदै ‘एसियन टाईगर’ लामखुट्टे!
यसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ कब्जियतबाट
न्युरोसर्जन डा. राजीव झासँगको संवाद : के हो मस्तिष्कघात, किन हुन्छ र के हुन् लक्षण?